Optical Brightener VBL ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုံ Shandong Raytop Chemical Co. , Ltd ။
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > optical အလင်းရောင် > စက္ကူ Optical Brighteners > optical အလင်းရောင် VBL
optical အလင်းရောင် VBL
ဝါဂွမ်းထည်နှင့်ကော်ထုတ်ကုန်များအတွက်အလင်းတောက်ပအေးဂျင့်, အလင်းရောင်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုပြသပြီး cellulose fiber နှင့်ပုံမှန်ထိတွေ့မှုရှိပြီးပုံမှန်အဆင့်ဆေးဆိုးခြင်းရလဒ်ဖြစ်သည်။ ပျော့ဖတ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းသို့မဟုတ် padding ဆိုးဆေးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မော်လီကျူးအလေးချိန် -872.84 (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆွေမျိုး Atom Mass အဖြစ် 1991)
Excutive Standard:GB ကို / T10661-2010
Fလွorescent ခွန်အား(eဖို့ quivalents.ရာဝတီsလုံလောက်သော
Similar to the s.ရာဝတီsample
အဖြူရောင် (the deviation နှင့်အတူthe S.ရာဝတီSလုံလောက်သော
အချော (rအထွေထွေအကြောင်းအရာPass တed180 မှတဆင့်μm- အပေါက်ဆန်ခါ)
အန္တရာယ်ရှိသောမွှေးကြိုင်သော Amin ၂၃ မျိုးကိုကန့်သတ်ထားသည်, မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
အဆိုအရနှင့်အတူthe s.ရာဝတီGB 19601-2010
Optical Brightener VBL isatypical representative of bis(triazinylamino)stilbene derivative.It can be soluble in 80 times soft water and shows anion character and the pH value resistant to acid and alkali is 6-11 and the expected pH value of dyeing bath is 8-9. When used in acidic solution, the fluorescence will weaken owing to the increase of acid and turns into yellow color. It can resist 300ppm hard water, 0.2၅% free chlorine, but don't resist the ion of copper and iron. It show stability to rongalite, but cannot be baked at high temperature. It has bluish voilet optical color and can be used in the one.bath နှင့်အတူanionic surfactant or dyestuff and nonionic surfactant and oxydol, unsuitable for application in cationic dyestuff and surfactant and raw synthetic resin.
1. Optical Brightener agent for cotton fabric and gluing products, light color or printing products. It show normal sun light resistance and has good affinity နှင့်အတူcellulose fiber, normal level dyeing result. can be used in printing pulps and exhausting or padding dyeing.
၂။ Polyvinyl alcoholic fiber နှင့် polyamide fiber အတွက် Optical Brightener agent ။
စက္ကူထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ စက္ကူပျော့ဖတ်သို့မဟုတ်ဆေးသုတ်ဆေးအတွက် Polyvinyl alcoholic fiber နှင့် polyamide fiber agent အတွက် Optical Brightener agent ။
l. When used in dyeing industry, add directly into the dyeing bath, solved နှင့်အတူwater then can be in use. the dosage is 0.08-0.3%, bath ration: 1:40, and the ideal bath temperature: 60℃.
2. When used in paper-making industry, dissolved နှင့်အတူ80 times water and added into paper pulp or paints. The dosage is 0.1-0.3% of the dry pulp or paints.
အိတ်ဆောင်:ပထမ ဦး ဆုံးပလတ်စတစ်အိတ်၌ထုပ်ပိုးခံရပြီးနောက်ကတ်ထူပြားပုံးသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်အပေါ်ယံပိုင်းစက္ကူအိတ်ထုပ်ပိုး။ အသားတင်အလေးချိန်သည်တစ်ပုံးသို့မဟုတ်အိတ်တစ်ခုလျှင် ၂၅ ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ် ၅၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။
သိုလှောင်မှု:အေး။ ခြောက်သွေ့သောလေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီးသိုလှောင်မှုကာလသည် ၂ နှစ်ထက်မပိုစေရ။
hot Tags:: Optical Brightener VBL၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံများ, တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်, ဝယ်ခြင်း, တရုတ်